Amiirka Qatar oo booqasho lama filaan ah ku tagay Iiraan - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Amiirka Qatar oo booqasho lama filaan ah ku tagay Iiraan
January 12, 2020 Duceysane277
Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa maanta socdaal lama filaan ah ku tagay magaalada Tehran ee caasimada, si uu wada hadal ula yeesho Mas’uuliyiinta sar sare ee dalkaa uu ka mid yahay Madaxweyne Hassan Rouhani.
Booqashada maanta oo Axad ah ayaa timid xilli xiisado kacsanaan ah ay ka taagan Khaliijka iyo Bariga Dhexe, kadib dilkii Mareykan uu ku dilay Baqdaad Taliyihii ugu sareeyay ee Ciidamada Kacaanka Iran Qaasim Suleymani iyo gantaallo aargoosi ah oo Iran ay ku beegsatay bartilmaameedyada Mareykanka ee Ciraaq.
Wakaaladda wararka ee Qatar QNA waxay sheegtay in wada hadalladu diiradda saari doonaan “xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo dariiqooyinka kor loogu qaadayo loona xoojinayo, iyo sidoo kale horumarkii ugu dambeeyay ee gobolka iyo arrimaha gobolka iyo arrimaha caalamiga ee danaha labada dhinac”.
Qatar, oo aad ugu dhow Mareykanka laakiin sidoo kale xiriir adag la leh Iran, oo ay la wadaagto gaaska ugu badan adduunka, ayaa ku baaqday in si nabad ah loo xalliyo xiisadaha gobolka.
Booqashada Amiirka Qatar ayaa noqoneysa tii u horeeyay ee Hoggaamiye dal uu ku tago Iran, tan iyo markii la dilay Qaasim Suleymaani 3-dii bishii Janaayo.
Sheikh Tamim waxaa weheliya wafdi rasmi ah safarkiisii ​​ugu horreeyay ee uu ku tago Iran tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2013.
James swan oo khayre kala hadlay nuuca doorasho ee dhici karta
Xildhibaanada Galmudug oo doortay gudoomiye kumeel gaar ah
Sawirro: Dibadbax looga soo horjeedo Damaca kenya ee Badda Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay
Wariye Coldoon oo maanta la Maxkamadeynayo
Akhriso: Galmudug oo War-saxaafadeed kasoo saartay Amarkii Puntland ku soo rogtay Gawaarida ka timaada Galmudug